Turkiga: Wadaad lagu xukumay in kabadan kun-sano oo xabsi ah - Tilmaan Media
Maxkamad ayaa Iniintii xukun ku ridday wadaad dalka Turkiga caan ka ahaan oo la yiraahdo Cadnaan Oktaar laakiin ku magac dheeraa Haaruun Yaxya kadib markii lagu helay dambiyo ay kamid yihiin fara xumayn jinsi. Wadaadka ayaa waxaa lagu xukumay 1075 sano oo xabsi ah.
Sidoo kale waxaa xukumo kala duwan lagu riday dad tiradoodu tahay 236 qof oo la shaqaynayay Cadnan Oktar, dadkaan ayaaa qaybtood gacanta lagu hayaa halka kuwa kalana ay baxsad yihiin.
Ninkaan oo lasoo xiray bishii Juun ee 2018 ayaa sidoo kale wajahaya eedaymo ay kamid yihiin, oga faaiidaysiga diinta samaynta waxyaabo sharci darro ah, ku xadgudubka nolosha khaaska ah ee dadka, iyo garab marka shuruucda ladagaalanka argagixisada iyo tahriibka, fara xumayn caruur, iyo u bassaasid dalal shisheeye gaar ahaan Israaiil.
Cadnan Oktar oo sheegta in uu yahay ku xeel dheere arrimaha Islaamka ayaa ah nin dood badan ka taagan tahay hab dhaqankiisa iyo afkaartiisa, waxaana lagu eedeeyay inuu faafinayo dhaqamo kahor imaanaya diitna Islaamka.
Wuxuu ku soo caan baxay kasoo muuqashada telefishanada isagoo ay geesaha ka fadhiyaan dumar aad u qaaqaawan. Wuxuuna sheegtay inuu yahay Mahdigii lasugayay. Wadadkaan ayaa waxaa kaloo lagu eedeeyaa taageerada xooga badan ee uu Israaiil u muujin jiray.
Dad badan ayaa u arka nin diinta u adeegsaday gaaridda dano gaar ah oo kahor imaanaya diinta Islaamka islamarkaasna khattar ku ahaa amniga iyo danaha dowladda Turkiga.